NIILE banyere US - Akụrụngwa Akụrụngwa Haiber (Shanghai) Co., Ltd.
Ihe eji eme ihe eji egwu egwu nke Haiber (Shanghai) Co., LTD, nke nwere afọ iri abụọ na otu n’ime ihe eji egwu egwu, ejirila ụlọ ọrụ dị ka Wanda, Wanke, Evergrande ezigbo ụlọ na ụlọ ndị ọzọ ama ama ama ama na China, na ọtụtụ nnukwu ụlọ ime ala. kpọọ egwuregwu na echiche anyị na ịdị mma anyị pụrụ iche.
Iji nye ndi oru aka n’uwa nile n’ime atumatu, imewe, nyocha na mmepe, imeputa ya, ihe omumu ya, rue oru ndi ahia mgbere ahia zuru oke.
Ndị otu mba ụwa, site na imepụta okike, jikọtara ya na ngwaahịa egwuregwu pụrụ iche dị nro, site na imepụta okike, tinye ụdị egwuregwu ihe ntụrụndụ na ala ndị ahịa, mebie ókèala, nweta ịdị n'otu nke ohere na ụdị akụrụngwa.
Haiber chepụtara ma wuo ebe egwuru-egwu n'ime ụlọ kwekọrọ n'ụkpụrụ nchekwa European na American. Ọ agafeela ụkpụrụ ASTM nke US, ụkpụrụ EN nke Europe, yana ụkpụrụ AU maka Australia. ma sonye na nhazi nke nkọwa oru nchekwa izizi nke akụrụngwa ntụrụndụ dị nro na China. Anyị na-ejikwa ụkpụrụ ndị a n'ọrụ nkọwa niile si r & d ruo mmepụta na nwụnye.